Mashiinka beeraha | February 2020
Beerta waa wax caado ah si ay ula qabsadaan hawlaha iyadoo la adeegsanayo qalab gaar ah. Tani waa wax ku ool ah haddii dhulku yahay dhul beeran oo aan aad u ballaaran. Meelaha waaweyn, waxaad u baahan tahay kaaliye lagu kalsoon yahay oo samayn kara noocyo badan oo shaqo adag ah - xayawaan. Tareenka MTZ 82 waa doorasho fiican, waa nooc ka mid ah cirifka caleenta caleenta caleenta leh, kaas oo ay soo saareen Mashruuca Traktor Minsk tan iyo 1978.
Ukraine ayaa ku heshiisay in ay iibiso qalabka Ukraine si beeralayda
Shalayto, wasiirka wasaaradda ayaa ansixiyay go'aanka gunnada beeralayda iibinta qalabka beeraha ee Ukraine iyo qalabka 15% ee kharashka. Laakiin waxaa soo baxday in beeralayda iibsanaya qalabka Ukriga ee 2017 la siiyo magdhow 15% kharashka, haddii 35% tirada guud ee mashiinada maxalliga ah.
Beeralayda Tansaaniya waxay siiyeen noocyada ugu waaweyn ee qalabka beeraha, kaliya 50%
Qaadashada noocyada aasaasiga ah ee qalabka beeraha waa 3-5% ee la heli karo, halka korontada caadiga ah ee mishiinka iyo tikidhada gawaarida, 8-12% waa in la iibsadaa sanad walba, ayuu yiri madaxa waaxda suuqa oo khayraadka iyo farsamada Xarunta Cilmi Baarista Qaranka "Machadka Dhaqaalaha Beeraha".
Fursadaha "Kirovtsa" ee beeraha, sifooyinka farsamada ee cagafurka K-9000
Tareenka Kirovets ee taxanaha K-9000 wuxuu tusaale u yahay jiilka cusub ee lixaad ee mashiinada laga sameeyay warshadda caanka ah ee St. Petersburg. Tikidhada K-9000 waxay heshay fursad ay ku jiri karto waayo-aragnimada iyo isticmaalka horumarinta tiknoolajiyada ugu dambeeyay ee aaggan. Mashiinku wuxuu leeyahay farsamooyin aad u sarreeya iyo sidoo kale sifooyinka hawlgalka, taas oo u oggolaaneysa in aaney soo saarin oo keliya, laakiin si aad uga sarreyso badi shisheeye siyaabo badan.
Adaptor for motoblock: sharaxaad, qalab, sida loo sameeyo naftaada
Shaqo kasta oo ku saabsan dhulku waxay qaadataa waqti badan iyo dadaal. Sidaa darteed, bannaanka u sii kordhaya qalab gaar ah, sida guusha. Laakiin ma samayn kartid cutubkan oo dhan. Adiga oo aan lahayn qalab gaar ah, ma awoodi doontid inaad xajisaan ama dhulka dhulka, iyo sidoo kale inaad ka saarto barafka iyo burburka. Kursiga leh kursi loogu talagalay socod-ilaaliyaha hadda waa qaali.
Tractor "Kirovets" K-700: sharaxaad, isbeddel, dabeecado
Tareenka K-700 wuxuu tusaale u yahay mashiinada beeraha ee Soofiyeed. Gawaarida waxaa loo soo saaray illaa iyo qarnigii nuska ahaa waxayna wali dalbaneysaa beeraha. Maqaalkani waxaad ka baran doontaa awoodda Kirovets K-700 ee baabuurta, oo leh sharrax faahfaahsan oo ku saabsan sifooyinka farsamaysan, oo leh faa'iidooyinka iyo khasaaraha mashiinka iyo sifooyin kale oo badan.
Sida loo isticmaalo qalabka "Tornado" ee beeraha
Kalluumeysiga gacanta "Tornado" - waa qalab beereed oo loo isticmaalo garaashka. Waxay si weyn u hagaajinaysaa tayada iyo xawaaraha shaqada ee dhulka. Ilaa hadda, qalabkan laguma helin aduunka oo idil. Kaliya labo sano ka hor, iyada oo aan la jarjarey iyo majarafad aagga, ma jirin wax la qaban karo.
Qaababka isticmaalka T-150 ee beeraha
Beeraha, waa wax aan macquul ahayn in la sameeyo qalab gaar ah. Dabcan, markaad ka shaqeyneyso dhul yar, uma baahnid, laakiin haddii aad si xirfad leh ugu shaqeyneysey dalagga kala duwan ama koriinka xayawaanka, markaa way adkaan doontaa in la sameeyo caawiye farsamo. Qodobkani waxaan ka hadli doonaa mid ka mid ah baabuurta caanka ah ee ugu caansan, oo beeralayda ka caawiyay muddo ka badan hal sano.
Noocyada ugu waaweyn ee baradhada loogu talagalay motoblock, faa'iidooyinka iyo faa'iido darrida isticmaalka beerta
Soo saarayaasha teknoolajiyada beeraha ayaa si joogto ah u ballaarinaya kala duwanaanshahooda, iyagoo isku dayaya inay ka farxiyaan tirada ugu badan ee macaamiisha. Ma ahan waqti dheer, in beero yar yar, goosashada waxaa loo sameeyey si gaar ah gacanta, laakiin maanta xaaladdu waa isbedeshay. Beeralayda waawayn ayaa isticmaalayay qalab ballaadhan oo wakhti dheer ah, taas oo aan fududayn karin kuwa yar yar.
Xeerarka xulashada kalluumeysatada hadhuudhka ah, sharaxaadda iyo sawirada noocyada caanka ah ee makiinadda cawska
Cuntada wax lagu cuno waa mid aad u faa'iido leh sannadihii la soo dhaafay, kaas oo loogu talagalay in si aad ah loo yareeyo shaqada beeralayda. Cutubkani waxaa loogu talagalay in lagu goosto quudinta xoolaha iyo shimbiraha. Qalabka wax lagu duubo ayaa kaa badbaadin doona in aad qaadatid hadhuudhka, qashinka dibna dib u soo celiso, xitaa lacag bixinta.
Beeraha dhexdiisa, waxaa loo isticmaalaa qalab gaar ah oo loogu talagalay in lagu shaqeeyo goobaha waaweyn. Mid ka mid ah kaaliyeyaashan waa MTZ-80, calaamadaha farsamo ee aynu ka fiirsan karno qodobkan. Qeexida gawaarida muraayadda Mashiinka gawaarida waa nidaam caadi ah qalabka fasalka: mishiinka waxaa lagu rakibay xargaha gearbox iyo muraayadaha gawaarida gadaaliga ah iyadoo la isticmaalayo konsks.
Mashruuca tikidhada MTZ 1221 (haddii kale "Belarus") wuxuu soo saaraa "MTZ-Holding". Tani waa qaabka labaad ee ugu caansan ka dib markii taxanaha MTZ 80. Naqshadda guuleysiga, farbarashada ayaa baabuurkan u oggolaanaya inuu sii joogo hogaamiyaha fasalka uu ka yahay waddamada USSR hore. Qeexida iyo dib-u-habaynta taraqadda Mashruuca MTZ 1221 waxaa loo tixgeliyaa in uu yahay naqshad isdaba-xajin ah oo fasalka 2aad ah.
Gawaarida yaryar ee guriga laga soo bilaabo motoblock: talaabo talaabo talaabo ah
Beeralay badan oo haysta dhul yar yar, waxay isticmaalaan meeraha isku dhafan ee doorka gawaarida, maadaama iibsashada mishiinka buuxa ee aan la aqbalin muddo toban sano ah. Sidee mabda 'u noqotaa is-beddelka motoblock-ga xargaha, sida loo sameeyo oo loo adeegsado qalabkan, waxaad ka baran doontaa maqaalkan. Fursadaha qalabka beerta iyo beerta yaryar ee ku saleysan motoblock, taas oo ku xidhan naqshadda iyo baahiyahaaga, waxaa loo isticmaali karaa barafka, xakamaynta ciidda, gaadiidka xamuulka, beeritaanka baradhada ama dalagyada kale.
Awoodaha iyo astaamaha farsamada ee isku darka xoolaha "Don-1500"
Isku darka dakhliga "Don-1500" - Tani waa 30 sano oo ku haboon suuqa, tayada aadka u fiican, oo maanta loo adeegsanayo in laga shaqeeyo beeraha. Way adag tahay in la doorto farsamada shaqada beerta. Waxaa muhiim ah in la doorto tusaalayaal leh faa'iidooyin badan oo aan faa'iido lahayn. Ku saabsan sifooyinka farsamooyinka iyo astaamaha modelka Don-1500 A, B, H iyo P, waxaan ku sheegi doonaa maqaalkan.
Noocyada ugu waaweyn ee beeraleyda iyo dabeecadaha
Ganacsiga beeraha ee xaaladaha casriga ah ayaa si dhakhso ah u koraya. Si loo helo goosashada si dhakhso ah iyo sahlan, habab farsamo oo kala duwan, unugyo farsamo iyo mishiinno ayaa loo isticmaalaa. Dalagyada miraha iyo dalagyada dalaggu waa mid aan suurtagal ahayn in la qiyaaso iyadoo aan la isticmaalin qashinka miraha.
Трактора не обласканы таким вниманием людей, как скажем, последние модели легковых авто или эффектные магистральные тягачи. Laakiin iyaga oo aan lahayn suurtagal ah in la qiyaaso beeraha iyo dhinacyada isgaadhsiinta. Noocyada mashiinada noocan oo kale ah ayaa si joogto ah u ballaarinaya, barnaamijka wax soo saarka MTZ ma aha mid ka reeban. Tixgeli mid ka mid ah tareenada ugu caansan ee warshadkan, oo ah MTZ-1253.
Isku darka "Acros 530": dib-u-eegis, karti farsameed ee qaabka
Casriyeynta casriga ah ee la isku daro waxa ay diiradda saaraan wax soo saarka sare iyo ka shaqeynta tiro badan oo ka mid ah dhulalka beeraha sarreeya. "Akros 530" waa farsamo xirfadeed oo looga golleeyahay in ay si gaar ah u buuxiso shuruudaha sare ee warshadaha beeraha.
Miisaanka looxa dhejiyey: mabda'a shaqada, adigu iskaa
Qaar ka mid ah boqolaal sanadood, waxsoosaarka beeraha ayaa ficil ahaan aan bedelin foomkooda. Waxay u egtahay in ay horeyba u suurtogal ahayd in ay hagaajiso. Wax kasta oo isbeddelay markii horumarinta sayniska iyo farsamada ay u timid aaggan. Gaar ahaan, qashinka caadiga ah wuxuu u jeestay qalab sahlan oo ku socda mashiinka yar-yar-xayawaanka, taas oo sidoo kale loo yaqaano gardarrada.